Ahoana ny fomba hitsitsiana ny Freestyle Libre amin'ny SingleCare - Fiaraha-Monina | Desambra 2021
Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Orinasa Wellness Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Lalao Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Vaovao, Wellness Fialam-Boly Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Zava-Mahadomelina Vs. Namana Fiaraha-Monina Fiaraha-Monina, Fahasalamana
Tena >> Fiaraha-Monina >> Ahoana ny fomba hitsitsiana ny Freestyle Libre amin'ny SingleCare
Ahoana ny fomba hitsitsiana ny Freestyle Libre amin'ny SingleCare
Raha tsy manana ny tenanao ianao dia mety mahafantatra olona farafahakeliny iray farafaharatsiny. Mihoatra ny Olona 30 tapitrisa any Etazonia fotsiny no misy ny aretina. Midika izany fa mety hainao tsara ny manahirana ny manara-maso ny haavon'ny glucose amin'ny fotoana rehetra. Ny fizotrany dia mitaky fikorohana ny tendron'ny rantsan-tànanao amin'ny fanjaitra mba hitsapana ny rano indray mitete - ouch!
Rehefa manana diabeta ianao dia zava-dehibe ny hahazoana antoka fa voafehy izany amin'ny alàlan'ny fanandramana matetika ny haavon'ny glucose anao, mifototra amin'ny tolo-kevitry ny dokotera. Soa ihany, ho an'ireo izay mahatsapa izany na leo fotsiny amin'ny famerimberenana, misy fomba mora kokoa: ny Libre freestyle , rafitra fanaraha-maso gliokaozy eken'ny FDA izay miasa ho solon'ny tsorakazo.
Ahoana ny fiasan'ny Freestyle Libre?
Ny Freestyle Libre dia miaraka amina sensor 14 andro izay mitafy amin'ny sandry ambony. Mamela anao hanara-maso ny tahan'ny siramamy ao amin'ny ra anao na aiza na aiza ary amin'ny fotoana rehetra.Tizy sensor dia mahazaka ny fifantohan'ny glucose ao amin'ny tsiranoka interstitial isa-minitra ary manoratra ny fatran'ny glucose ao anatin'ny 15 minitra. Ireo tahirin-kevitra rehetra ireo dia voatahiry ao anaty lohan-tsoratra valo ora.Ny sety dia miaraka amin'ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa, tariby USB, ary adaptatera mandeha amin'ny herinaratra.
Ohatrinona ny vidin'ny Freestyle Libre?
Tena mila preskripsi ianao raha hividy ny rafitra Freestyle Libre 14 andro-ary matetika dia lafo ny sensor. Ny vidin'ny eo am-paosy dia manodidina ny $ 129.99, saingy afaka manangona amin'ny karatra fitahirizana SingleCare ianao. Azo ampiasaina izy io na eo aza ny fiantohana anao— na dia ao amin'ny Medicare aza ianao .
Azonao atao ny mikaroka ny fanaraha-maso diabeta Libre Freestyle anao ny tranokalanay alohan'ny handehananao any amin'ny farmasia. Mba hahitana ny vidiny tsara indrindra, dia mamporisika anao izahay hampitahanao ny vidinay amin'ny vidiny sy / na ny copay anao.
Azonao atao ny misafidy ny handefa hafatra, handefa mailaka na hanonta ny tapakila amin'ny tenanao avy ao amin'ny Tranonkala SingleCare na mangataka karatra ara-batana halefa any aminao, mba hahafahanao maka mora foana ireo sensor Freestyle Libre ao amin'ny fivarotam-panafody iray miaraka aminay, izay misy:CVS, Walmart, Kroger, Walgreens, Target, Longs Drugs, Fry's, Kroger, Rite Aid, ary Duane Reade.Mba hijerena ny tahiry dia mila manoratra fotsiny ny kaody zip ianao mba hahazoana ireo fivarotam-panafody akaiky anao ary manamboatra habetsahana (raha maka ho an'ny tenanao sy ny namanao na olona iray ao amin'ny fianakavianao ianao).
Raha manadino ianao na tsy manam-potoana hijerena mialoha, dia azonao atao ihany koa ny mangataka amin'ny mpitsabo anao hamoaka ny safidy rehetra ao amin'ny kaontera.
Manatevin-daharana ireo fanafody an-tapitrisany miliara amin'ny fanafody an'arivony amin'ny SingleCare. Hahazo ny vidiny farany mahomby indrindra hatrany ianao ny tranokalanay . Mitahiry fifaliana!
Ahoana no hamantarana - sy hitsaboana - aretina fahadimy (parvo) amin'ny ankizy
Ohatrinona ny vidin'ny IVF?
drafitra b mandra-pahoviana no afaka hitondrako azy
afaka manasitrana uti ao an-trano ve ianao
inona ny mahasamihafa ny oxycotin sy ny oxycodone
fomba tsara indrindra hanasitranana ny tsy fihenan'ny erectile voajanahary
holatra amin'ny rantsantongotra ny fomba fanesorana azy
Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana